Ceasefire agreements playacrucial role in ending armed conflict. They are often the primary tool to reduce or stop violence and create space for political negotiations. Due to their technical nature, ceasefire talks have been historically exclusive processes between governments and armed groups. Whileagrowing body of research has addressed ceasefire design and implementation, there is stilladearth of knowledge about the inclusion of women in ceasefire negotiations […]
August 8, 2016 • By Inclusive Security • Tags: Ethnic Armed Organizations, Human Rights, Inclusive Security, Nationwide Ceasefire Agreement, Peace Process, Women • Read more ➤
The Mai Ja Yang conference concluded on 30 July, 2016 after four days of meetings between ethnic armed organizations (EAOs), political parties and civil society actors in Kachin State […]
August 7, 2016 • By Burma Partnership • Tags: 21st Century Panglong Conference, Burma Partnership, Ethnic Armed Organizations, Human Rights, Kachin State, Mai Ja Yang Conference, National League for Democracy, Peace Process • Read more ➤
EAOs’ Plenary Meeting
July 27, 2016 • By Ethnic Armed Organizations • Tags: EAOs' Plenary Meeting, Kachin State, Nationwide Ceasefire Agreement, Peace Process • Read more ➤
နယ်စပ်အခြေစိုက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် နယ်စပ်အခြေစိုက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၄၀ ဖွဲ့မှ ၎င်းတို့အား မူလနိုင်ငံသားများအဖြစ် ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ပေးပို့တင်ပြခဲ့သည် […]
July 26, 2016 • By 40 Burma Border-based Civil Society Organizations • Tags: 40 Burma Border Civil Society Organizations, National League for Democracy, Peace Process • Read more ➤
နယ်စပ်အခြေစိုက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေကြောင်း မိမိတို့မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ မိမိတို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် နယ်စပ် ဒေသများတွင် အခြေစိုက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဖက်ဒရယ်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး တို့အတွက် မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ်ကြပါသည် […]
July 25, 2016 • By 40 Burma Border-based Civil Society Organizations • Tags: 40 Burma Border Civil Society Organizations, Natinal League for Democracy, Peace Process • Read more ➤
June 20, 2016 • By Karen Women's Organisation • Tags: IDPs, Kachin State, Karen Women Organisation, Peace Process, Shan State, World Refugee Day • Read more ➤
၁။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့၌ နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်အတူ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၄) မှ (၂၆) အထိအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယင်း ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၊ လေ့လာသူများ နှင့် နည်းပညာ အကြံပေးများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၇၉) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည် […]
March 26, 2016 • By Ethnic Armed Organizations • Tags: Ethnic Armed Organizations, Ethnic Nationalities, Nationwide Ceasefire Agreement, Peace Process • Read more ➤